Global Voices teny Malagasy » Arzantina: Diego Maradona, Mpanazatra Vaovao Ho An’ny Baolina Kitra Arzantina · Global Voices teny Malagasy » Print
Arzantina: Diego Maradona, Mpanazatra Vaovao Ho An'ny Baolina Kitra Arzantina
Voadika ny 25 Mey 2018 6:29 GMT 1	 · Mpanoratra Jorge Gobbi Nandika (fr) i Claire Ulrich, miora
Sary an'i JMRobledo  nampiasàna ny fahazoandalàna Creative Commons.
Rehefa mivahiny any ivelany ireo Arzantina, mifarana foana amin'ny fitanisàna ny anarana “Maradona” ireo resadresaka ifanaovana amin'ireo mponina eo an-toerana. Diego Maradona  no mety ho Arzantina tena malaza indrindra eran'izao tontolo izao, ary na ny bitika indrindra amin'ireo fihetsika ataony aza dia misoratra ho lohateny lehibe. Araka izany, vaovao iraisam-pirenena manan-danja ny naha-voatendry azy ho mpanazatra ny ekipam-pirenena arzantina amin'ny lalao baolina kitra. Taorian'ny fialàn'i Alfio Basile, sy ireo vokatra tsy dia namirapiratra loatra, nampitaintaina ny rehetra ny fotoana lavabe napetraky ny Federasiona Arzantina ny Lalao Baolina Kitra hisafidianana tamin'ireo kanidà marobe ho eo amin'ny toeran'ny mpanazatra. Ankehitriny, manontany tena ireo arzantina hoe nahoana no ilay mpanao baolina kitra goavana erantany no hipetraka ho mpanazatra fotsiny ary ho afaka hiantoka ny voninahi-pireneny ve izy amin'ny Amboara Erantany amin'ny taona 2010 .
Eo amin'ny blaogy E-Blog [amin'ny fiteny espanola], Leandro Zanoni miaro ny fifidianana an'i Maradona ary manoratra hoe :
Vao avy nanoratra amin'ny fomba tsara ny tantara ny Fikambanan'ny Mpanao Baolina Kitra Arzantina (AFA). Tsy misy olona mendrika io toerana io afa-tsy i Diego, amin'izao fotoana izao… Nazava tamin'i Grondona (filohan'ny AFA) fa mila zavatra hafa ny ekipam-pirenena, olona iray tena mandray an-tanana, mandrisika, mpitarika iray tokony hajaina fa tsy hoe fotsiny nahazo loka marobe teo an-toerana.
Eo amin'ny World Cup Blog , raisina koa ny fiarovana an'i Maradona amin'ny teny anglisy.
Ho azy, ny BlogBis [amin'ny fiteny espanola]  mitsikera ny fifidianana an'i Maradona tao anatin'ireo kandidà tsara indrindra:
Mpanazatra manana traikefa sy matihanina marobe no misy ao amin'ny firenena. Ry zareo tsy nifidy ny fahaizamanao, ny hakingana, fa ireo fotokevitra sahala toy ny hoe “Ny fitiavana ny akanjo manokan'ny tarika”, “mandrisika ireo mpilalao”, sy ny sisa… Amin'ny maha-mpilalao, tafiditra ao anaty Tantara izy, fa amin'ny maha-mpanazatra, mampangoraka ny dingana vitany. Saingy tsy misy dikany ireo vokatra. Ny fiankohofana aminà andriamanitra iray no nandresy.
Ireo hevitra hafa mikasika io lohahevitra io dia afaka vakiana ao amin'ny blaogy an'i Marcelo Gantman [amin'ny fiteny espanola] ; Cuaderno Contable [amin'ny fiteny espanola] ; Selección Deportiva [ amin'ny fiteny espanola ]; ary Empresas Contables [ amin'ny fiteny espanola ].
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/25/119980/
 Sary an'i JMRobledo: http://flickr.com/photos/retazos/2402203508/in/photostream/
 Amboara Erantany amin'ny taona 2010: http://www.fifa.com/worldcup/index.html
 miaro ny fifidianana an'i Maradona ary manoratra hoe: http://eblog.com.ar/4979/el-gran-dt
 World Cup Blog: http://www.worldcupblog.org/world-football/in-defence-of-diego-maradona.html
 BlogBis [amin'ny fiteny espanola]: http://blogbis.blogspot.com/2008/10/seleccin-nacional-reflejo-de-la.html
 Marcelo Gantman [amin'ny fiteny espanola]: http://gantmanblog.com/apuntes-sobre-maradona-y-la-seleccion_993/
 Cuaderno Contable [amin'ny fiteny espanola]: http://hjorgev.wordpress.com/2008/10/30/%c2%bfmaradona-para-presidente/
 Selección Deportiva [: http://secciondeportiva.com/2008/10/nadie-sabe-de-la-seleccion-como-maradona/
 Empresas Contables [: http://empresasencrisis.blogspot.com/2008/10/maradona-opio-para-el-pueblo.html